Sina Fanangonana birao vita pirinty avo lenta novolavolaina magazine mpamokatra sy mpamatsy | Huaguang
Ny fanangonana birao fanontam-pirinty avo lenta avo lenta
Oniovaova Magazine File Box
Hateviny: E flut
Antsipirian'ny fonosana: pcs dimy ao anaty polybag na ny zavatra takinao
Est. Fotoana (andro) 15 20 Hifampiraharahana
Corrugated magazine magazine box dia iray amin'ireo filebox marobe. Izy io dia boaty misokatra izay matetika ampiasain'ny mpiasa birao amin'ny fitehirizana sy fanasokajiana. Mora ny mitahiry sy mandray rakitra.
Matetika misy antontan-taratasy maro ao amin'ny birao. Ny sasany amin'izy ireo dia manan-danja ary ampiasaina matetika. Misy andinin-tsoratra masina, resahina indraindray; Ny sasany dia tsy dia ilaina loatra ary matetika mipetraka tsy miasa. Raha atambatra ireo antontan-taratasy rehetra ireo dia manjary tsy mandamina ary tsy mora amintsika ny mijery azy. Eto no miditra ny fitoeran-drakitra.
Mila ny fanasokajiana antontan-taratasy isan-karazany isika, arakaraka ny maha-zava-dehibe sy ny fahamaroan'ny fampiasana azy ireo ao anaty rakitra misy efitrano maro samihafa, sy ny marika mifanentana aminy, toy ny: ampahafantaro ireo rakitra an-dakilasy, rakitra tahiry, ho an'ny rakitra rakitra sy arisiva rakitra, sns., noho izany ampiasainay dia ho mazava ihany koa amin'ny indray mipy maso, tadiavo ilay rakitra ilainao amin'ny voalohany, manatsara ny fahombiazan'ny asanay. Mandritra izany fotoana izany dia afaka mampiseho ny tsiron'ny olona sy ny kalitaon'ny asany koa ny fitoeran-drakitra madio, ny tontolo iainana madio dia manampy amin'ny fanatsarana ny hafanam-pontsika koa.
Raha ny filazan'ilay fitaovana dia azo zaraina amin'ireto sokajy telo manaraka ireto ny antontan-taratasy:
1: boaty fisie magasinara. Ny boatin-drakitra an-tsokosoko mitafo volo dia manana vidiny mirindra kokoa sy fiarovana ny tontolo iainana, izay malaza amin'ny tsena eropeana sy amerikanina.
2: Fantson-drakitra plastika, ity kalitao maivana amin'ny rakitra ity, tsara ny vidiny, mitana ny tsena lehibe indrindra, saingy ity fitaovana amin'ny rakitra ity dia tsy matanjaka, mora vaky;
3: Ny fitoeran-drakitra vita amin'ny hazo, ity karazana fitoeran-drakitra ity dia toa tsara sy malala-tanana ary maharitra. Tena malaza amin'ny mpiasan'ny birao;
4, fehezan-drakitra vy, ny firafitry ny fisie fisie azo antoka sy mafy orina, hanome olona iray fahatsapana madio sy tsara.
Ny fitaovana, ny lamina ary ny habe dia azo amboarina arakaraka ny takian'ny vahiny.
Teo aloha: Ny boaty fitehirizana taratasy na birao an-trano misy afovoany lehibe azo aforitra
Manaraka: Fametahana tavoahangy tsy misy rano, sarimihetsika maivana na pirinty vita amin'ny boaty misy horonana
Boaty fitehirizana haingon-trano
Latabatra fanontana namboarina manokana vita amin'ny baoritra ...
Ny birao fanontana vita pirinty avo lenta ...